काठमाडौं, जेठ १७ -
निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोदनको घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई निर्वाचनमा सहभागी हुन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको छ । यो खबर आजका अधिकांश पत्रपत्रिकामा छापिएको छ। हामीले नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट लिएका हौ।
राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन ऐन संशोधन
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई उम्मेदवारी मनोनयनमा रहेको कानुनी जटिलताको हल खोज्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, जेठ १६ - नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन्। यो खबर शम्भु प्रसाईले लेखेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय नि...
बजेटमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता, गाउँ पस्यो ‘सिंहदरबार’
काठमाडौं, जेठ १६ -
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ।भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
नेपाली फिल्म छाड्छु भनेकै हुँः निखिल उप्रेती
बिक्छ त केवल एक्सन । त्यसैले त उनको परिचय नै छ, ‘एक्सन हिरो’ । प्रसंग हो, अभिनेता निखिल उप्रेतीको । त्यसो त उनी बलिउडमै जम्न चाहन्थे । मुम्बई गएर वर्षौं संघर्ष पनि गरे । तर, बलिउडमा जे सिके फर्केर देखाए, नेपालमै । ‘पिँजडा’बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेका निखिल ०५८ यता निरन्तर एक्सन हिरोको परिचयमा छन् । आजको नयाँ पत्रिकाकामा महेश तिमल्सिनाले निखिलसँग गरेको कुराकानीबाट हामीले यो खबर लिएका हौ।
खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ। स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजना/बजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ। सरकारले धनगढी-अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी-इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
काठमाडौंमा माओवादी केन्द्र र साझा पार्टीको धरौटी जफत
काठमाडौं महानगरपालिकामा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको मेयर र उपमेयर उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। मेयरका उम्मेद्वार सर्वोत्तमदास डंगोल र उपमेयरकी उम्मेद्वार सुशीला पौडेल दुबैको जमानत जफत भएको हो।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा 'भ्याकेट' हाल्ने भएको छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
तीन दलका वडा अध्यक्ष उम्मेदवारको नाम एउटै
मंगलसेन, जेठ १६ - स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अछाममा वडा अध्यक्ष उम्मेदवारमा तीन वटा दलले एउटै नाम भएका वयक्तिलाई अघि सारेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ। मेल्लोख गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षको उम्मेदवारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रल...
स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख पद दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिएका कतिपयले आफूलाई पनि भोट नदिएको पाइएको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
दुई पांग्रेमा ८० प्रतिशत कर, कुन मोटरसाइकलको कति कर बढ्यो?(सूचीसहित)
भरतपुरमा यसकारण च्यातियो मतपत्र
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा थियो। सोमबार गणतन्त्र दिवससँगै भतरपुर महानगरपालिकाको मेयर घोषणा हुने निश्चितजस्तै थियो। यही आसमा आइतबार सुतेका भरतपुरबासीहरूलाई सोमबार बिहानैको खबरले नराम्ररी झस्कायो। मध्यरातमा मत पत्र च्यातेपछि मतगणना कार्य स्थगित भइसकेको थियो। यो खबर रमेशकुमार पौडेलले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, जेठ १५ -
‘मलाई सम्झना छ, केही वर्षपहिले एआईजीको प्रमोसनको दौडधूपको समयमा एसएसपी रमेश खरेलले भनेका थिए, सुटकेस बोकेर नेताहरूकहाँ दौडधूप चलिरहेछ तर समय धेरै बदलिसकेको रहेछ, अब नेपालमा सुटकेस होइन बोरै बोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको रहेछ, खाम मात्रै बोकेर कुद्ने वा केही बोक्न नसक्ने प्रहरी अधिकृतको हविगत के होला? ' यी भनाइ सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण मुखैमा आएको बढुवा नपाई अवकाशतर्फ धकेलिएका एसएसपी यादवराज खनालले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा व्यक्त गरेका हुन्।
विश्वको सर्वोच्च चुचुरो सगरमाथा (८ हजार ८४८ मिटर अग्लो)मा मानव पाइला पुगेको सोमबार ६४ वर्ष पुगेको छ। न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले २९ मे १९५३ मा पहिलोपटक सगरमाथाको चुचुरो टेकेका थिए। त्यसपछि आरम्भ भएको आरोहण यात्राका दौरान अहिलेसम्म ५ हजारभन्दा बढी आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेशनल मेडिकल साइन्सको नक्कली माइन्यून पुस्तिका बनाएर छात्रवृत्ति दिलनउजे भन्दै ठगी गरेको कसुरमा २०७३ जेठ ३२ गते नुवाकोटका सरोज केसीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना तोक्यो। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
नेपाल खाद्य संस्थानले राजधानीका विभिन्न पाँच ठाउँमा खाद्य संस्थानका खाद्य सामग्री बिक्री केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ । संस्थानले अब उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्र, कलङ्की, बल्खु, सातदोबाटो, चाबहिल, कोटेश्वर गरी थप पाँच ठाउँमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो। यो खबर सीता शर्माले आजको गोरखापत्रमा लेखेकी छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएर कामचलाउ बनिसकेको सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेटको आकार जम्बो हुने भएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आव २०७३/७४ को सरकारको प्रगति वितवरण संसदमा पेश गर्दै नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय ९१ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ पुगेको बताए। अघिल्लो आवमा प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार ५ सय २५ रूपैयाँ थियो। अमेरिकी डलरमा भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा यस्तो आय ७५७ डलर थियो भने चालु आवमा ८६२ डलर भएको जानकारी दिए।
सेयरका लागि आवेदन दिने तर नपाउने समस्याले सर्वसाधारण लगानीकर्ता निराश भइरहेका छन्। अब भने त्यस्तो दिग्दारी खेप्नु नपर्ने भएको छ। यो खबर विष्णु बेल्बासेले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा सहभागी गराउन केही दिन निर्वाचन सार्न सत्ता र प्रतिपक्षको शीर्ष तहमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ३१ को स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन साता-दस दिन सारेर भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मौन समर्थन गरेका थिए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, जेठ १३ -
साउदी अरबमा दुर्घटनामा परेर ‘ज्यान गुमाएका’ भनिएका भोजपुर काउलेका सुवास तामाङको ‘क्षतविक्षत शव’ घर आइपुग्नासाथ परिवारले रित अनुसार अन्तिम संस्कार गर्‍यो। मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र बिमा रकम पनि बुझे।
अछाम, जेठ १३ -
अछामको साँफेबगरबाट करिब १० किलोमिटर उकालो चढेपछि रिडिकोट पुगिन्छ। साँफेबगर-मंगलसेन सडक खण्ड त्यही रिडिकोट गाउँको बीचैबीच गएको छ। सडकको दायाँतिर हेर्दा ठुल्ठूला महल देखिन्छन्। परम्परागत कलाले सिंगारिएका यी घर अहिले रित्ता छन्। कुनै घरका छाना पूरै भत्किएका छन् त कुनैका भत्किने क्रममा छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै नयाँ सरकार गठनको तयारीमा लागेका हुन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
नवनिर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएको छ । आफ्नै वडामा बसेर नियमित कार्य सम्पादन गर्नुका साथै नगर वा गाउँ कार्यपालिकामा पनि विभागको जिम्मेवारी हुने भएकाले वडाध्यक्षले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हो । यो खबर नगेन्द्र सापकोटाले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, जेठ १३ - पश्चिमी वायु र पूर्वी भेगमा मनसुनी वायुको प्रभावले शुक्रबार देशभरि बदली भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार देशका सबै स्थानमा बादल लागेको र पानी परेको छ । महाशाखाका मौसमविद् विभूति पौडेलका अनुसार आउँदो सोमबारसम्म छिन...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रवार आफ्ना उपराष्ट्रपतिका परिवारका सदस्यसहित २ सय ५८ जनालाई शुसोभित गरेकी छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, जेठ १३ - संवैधानिक परिषदले निर्धारित समयभित्र नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेर संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको छ। यो खबर हामीले नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ। नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सो पद रिक्त हुन लागेको एक महिनाभित्र सिफार...
काठमाडौं, जेठ १३ - आन्दोलनहरूले नायक जन्माउँछन् भने चुनावले विजेता। तर, विवेकशील नेपाली दलले काठमाडौं महानगरमा मेयर उम्मेदवार बनाएकी रञ्जु दर्शनाको हकमा यो नियम लागू भएन। उम्मेदवार बनेका दिनदेखि नै उनले विजेताले जस्तो चर्चा पाइन्। निर्वाचनको १२ दिनपछि करिब १ लाख ७५ हजा...
काठमाडौं, जेठ १३ - चार वर्षदेखि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रोकिएर रहेको अजय सुमार्गीको ३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ निकाशा गर्न कसरत सुरू भएको छ। यो खबर मेनुका कार्कीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्। सुमार्गीले दाहाल सरकार आएदेखि नै उक्त पैसा निकासा गर्न कसरत गर्दै...